China Lipstick Kugadzira uye Fekitori | Wangtong
Lipstick inowanzo shandiswa zvekuzora zvevakadzi muhupenyu hwezuva nezuva. Iwe unoziva mashandisiro ekurapa miromo? Heano dzimwe nzira dzekushandisa lipstick.
1. Maitiro ekupenda lipstick nemuromo bhurasho:
Isa rukoko rwemiromo usati waishandisa kuti miromo yako isatsemuke.
Kana ivo vasikana vane miromo yakasviba vachigona kuzadza hwaro hwesikirimu kirimu kutanga, ishandise zvakaenzana pamiromo kuvhara chakavanzika neminwe, uye kana vasikana vane miromo yakajeka vanogona kuita vasina hwaro.
Dhirorera penzura yemuromo uchitenderedza chimiro chemiromo yako, wobva waisa muromo wako wemuromo kuti ugadzire mutsetse wakajeka wemiromo unosimbisa iwo ruvara rwewako.
2. M miromo:
Kutanga, nyudza swab yedonje mune yakasarudzika uye isa M pamuromo wepamusoro kuti ujekese mativi emiromo uye kusimudzira iyo M miromo.
Nyura mukati nemumuromo bhurashi zvakare tora lipstick ine "M" mhando kuti uite daub kuruboshwe uye kurudyi mativi, iyo miromo bead nzvimbo inokwevera iyo yakakwira poindi, iyo yepakati yemuromo pamuromo inodhonza kusvika kure sezvinobvira kunzvimbo yepasi.
3.Mukati wakakora wekupfeka:
Iyi ndiyo nzira yakajairika yatinoshandisa miromo.
General lipstick yakanongedzwa, isu tinoisa muromo wepipstick mudenga, akapusa maviri kurova mukati mekiromo kuita V chimiro yekumira.
Ipapo, nemusoro wako unonongedza pasi, tanga kubva pamakona emuromo wako uye shanda nzira yako pasi pakati pemuromo wako kuti uratidze kumucheto kwemuromo wako wepamusoro.
Wobva wanyungudutsa muromo wezasi wozora kakawanda kusvikira miromo yazara zvakaenzana.
4. Ruma miromo yako:
Shandisa muromo wekutanga kuti uchenese muromo wako uchivanze uye uvhare nemuvara wepakutanga.
Shandisa bhurasho remiromo kuti unyike iyo lipstick mukati memuromo wako. Shandisa minwe yako kuparadzira lipstick kunze kwemuromo wako. Nyorera zvakaenzana.
Ihwo hunyengeri hwekushandisa iyi lipstick kushandura iyo ruvara kubva kurima kuenda kune yakajeka kubva mukati nekunze.
Chekupedzisira, isa muromo mumuromo wemiromo yako kuti uwedzere ruvara rwemuromo wako.
Kana iyo nzira yakapusa ndeye kungotenga iwo maviri-mavara lipstick!
5. Peta kupfeka.
Yakawanda lipstick yakatengwa kumashure kuti uone kuti mhedzisiro yekushandisa imwe chete haina kunaka sekufungidzira, saka iwe unofanirwa kushandisa nzira yekudyidzana kuti muromo wako uratidzike kunge wakasarudzika.
Iyi nzira ndiyo yakapusa, senge yakajairika nzira yekukora, isa muromo pamuromo, uye wozopedzisira waisa rukanda rwemuromo kumusoro kwaunoda kuti ruvara ruratidze Blingbling.
5. Isina-tsvimbo tsvuku yekumira nzira:
Nhanho yekutanga ndeye kungoisa nhete yemiromo, wobva wadzvanya muromo wako netissue. Tora chidimbu chetishu, chiise pamiromo yako wochinyika ne bhurasho remuromo.
Dab imwe poda uye ishambidze pamiromo yako netauro repepa.
Nenzira iyoyo lipstick haizonamatira pamukombe!
Pashure: Mumvuri weziso